Skål Bangkok dia nahazo valisoa 4 tamin'ny World Congress
Home » Lahatsoratra farany farany » Awards » Skål Bangkok dia nahazo valisoa 4 tamin'ny World Congress
Associations News • Awards • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Septambra 25, 2019
Nandritra ny farany-nofaranana Kaongresy eran-tany Skål faha-80 any Miami, Florida, Thailand's Bangkok Club dia nambara ho tsara indrindra amin'ny klioba Skål tsara indrindra tamin'ny taona 2018/2019.
Ny fizarana ny loka dia misy fizarana roa - ny vato voalohany isaky ny klioba ary ny faharoa avy amin'ny Komity Mpanatanteraka. Ny vato avy amin'ny Clubs dia maneho ny 60% amin'ny vato totalina ary ny 40% sisa tavela dia avy amin'ny mpitsara ny Komity Mpanatanteraka.
Ny klioba nahazo vato betsaka indrindra dia nantsoina hoe "Skål Club of the Year 2018/2019" ary mahazo ny Trophy Fahatsiarovana Michael O'Flynn, ary koa fisoratana anarana indroa maimaimpoana ho an'ny Kongresin'ny World Skål 2020.
Nafenina hatrizay nanambarana ny lanonana ny fanambarana. Tamin'ny fotoana toy ny Oscar dia nihoby mafy ny mpanatrika tamin'ny fanambaràna ny klioba nandresy. Fotoana niavonavona ho an'i Thailand sy Bangkok.
Nandritra io lanonana io ihany, ny Yanna Ventures Anurak Community Lodge any Thailandy any atsimon'i Thailandy dia nahazo ny loka eran-tany Skål Sustainable fizahan-tany 2019 amin'ny sokajy Rural Accommodation. Yanna Ventures dia mpikambana ao amin'ny Skål International Bangkok, ary ny loka dia noraisin'i Andrew Wood tamin'ny anaran'ny filoha Yanna Ventures, Willem Niemeijer.
Andrew Wood dia nahazo, nandritra ny taona maro nanompoany an'i Skål International, ny loka ambony indrindra an'i Skål, ilay mpamaky an'i Membre d'Honneur.
Nahazo Skalleagues vitsivitsy monja tamin'ny tantaran'ny Fikambanana nandritra ny 85 taona. Anisan'izany i Bessie Samargarchan.
Nahazo ny loka Gold ny Bangkok Club noho ny fisondrotan'ny mpikambana ao amin'ny Skål Club 2019. Ny club dia nampitombo ny mpikambana ao aminy 155% hatramin'ny taona lasa ary mitombo hatrany ny mpikambana vaovao 4 isam-bolana.
Hoy ny Filoha Andrew momba ny mari-pankasitrahana: “Tena mirehareha amin'ny komity mpanatanterako aho. Sambatra ny klioba manana ekipa miasa mafy izay tsy mampaninona azy ny mandeha lavitra mba hahatratrarana zavatra lehibe ho an'ny Club sy ireo mpikamantsika. Nahitam-bokany ny asa mafy nataon'izy ireo ary manana drafitra lehibe ho an'ny ho avy izahay.
“Mihamitombo hatrany ny hetsika ataonay ary ny masonay mijery ny antsipirihany sy ny hatsaram-pahefany hetsika, miaraka amin'ireo mpanohana anay, dia manome hetsika tsy maintsy atrehana isam-bolana. Ny fikarakarana ireo mpikambana ao amintsika no zava-dehibe indrindra. Mpiara-miasa sy namana izahay. ”
Andrew Wood dia voafidy ho filohan'ny klioban'ny Bangkok tamin'ny martsa 2018. Izy koa dia filohan'ny klioba teo aloha tamin'ny 2008-2010. Izy koa dia mitana ny portfolio an'ny filoha lefitra SKIAL ASIA, tompon'andraikitra amin'ny Azia atsimo atsinanana ary hatramin'ny volana martsa tamin'ity taona ity, ny filoha lefitra Skål Thailand.
Ny herinandro faha-80 taonan'ny Kongresy Iraisam-pirenena Skål Iraisam-pirenena 2019 dia notanterahina ny herinandro lasa teo nanomboka tao Miami tamin'ny sambo Royal Caribbean's Symphony of the Seas miaraka amina mpikambana Skål 500 sy ny fianakaviany ary ny sakaizany. Ny kongresy dia nanomboka tamin'ny 14-21 septambra 2019.
Nandritra ny dia an-tsambo dia nitsidika an'i Honduras, Mexico ary Bahamas ny fitsangantsanganana. Skål Thailand dia te-hamerina ny sahirana dia naka sekoly mahantra any Honduras.
Nandritra ny fiantsoana azy ireo tany Roatan Honduras, ny mpitantana ny Komitim-pirenena Skål Thailand sy ny fianakavian'izy ireo dia nankany amin'ny sekoly, mba hanome izany.
Naneho hevitra momba ity fandraisana andraikitra ity ny filoha Skål Thailand Wolfgang Grimm dia nilaza fa, "Skål Thailand Backpacks for Kids dia fandraisana andraikitra CSR notontosain'ny Skål Thailand ho toy ny hetsika CSR ho an'ny Kaongresy Eran-tany Skål 2019, mba hamerenany ireo vondrom-piarahamonina sendra anay."
Ireo valizy dia avy amina mpivarotra ambongadiny monina any Etazonia ary naloan'ny Skål Clubs any Thailandy.
Ny filoha lefitra zokin'ny Skål Thailand, Kevin Rautenbach dia nilaza fa, “endrika faly feno tsiky feno 100 mahery no hitan'ny ankizy. Izy ireo dia manana kely dia kely amin'ny fiainana, ny fanabeazana no lakilen'ny fahombiazany amin'ny ho avy ary ny loha kely manomboka amin'ny fanomezana ny fitiavana nomen'ny olon-tsy fantatra dia mety hitondra fiovana lehibe. Ity no fanomezana kely ara-bola avy tany Thailandy ”.
Ankoatry ny loka efatra natolotra an'i Skål Bangkok tamin'ny World Congress, ny klioba dia nahazo loka roa talohan'izay tao amin'ny Kongresin'i Skål Asia tamin'ny volana Jona tao Bangalore izay nahazoan'izy ireo ny loka Club of the Year miaraka amin'ireo mpandresy Skål Tokyo sy Skål Bangalore ary Bangkok dia nahazo ny mari-pankasitrahana fizahan-tany maharitra ho an'ny Yanna Ventures Anurak Community Lodge.
Andrew J Wood mandray ny Membre d'Honneur avy amin'ny filoham-pirenena Skål Lavonne Wittman
Ireo mpikambana Skål mitsidika avy any Thailand dia nanolotra kitapo kitapo maimaimpoana ho an'ny ankizy mpianatry ny sekoly mahantra 120 any Honduras
Ny fahazoana ny loka volamena amin'ny anaran'ny Bangkok Club dia Pichai Visutriratana talen'ny hetsika ao amin'ny Club
Club of the Year 2018/2019 natolotra an'i Skål Bangkok